भजाउने र देखाउने लोकतन्त्र, लेख्ने नेपालमात्र - Goraksha Online
भजाउने र देखाउने लोकतन्त्र, लेख्ने नेपालमात्र
संविधान जारी भयो लोकतन्त्रको नाउमा ।
दीपावली मनाइयो देशका ठाउँठाउँमा ।।
संघीयता लोकतन्त्र साइलेन्टमा बस्यो ।
सरकारको परिपत्रमा नेपालमात्र अट्यो ।।
असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक तथा निर्णयले पत्राचारमा एकरुपताको लागि भन्दै संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र नेपाल भन्ने ठाउँमा नेपाल मात्र लेख्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत आर्थिक ४ गतेका दिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारका विभिन्न तह र निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि भन्दै परिपत्र गर्न भनेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र कार्यान्वयनका लाग आदेशात्मक पत्राचार गरेको थियो । सोही अनुसार कार्तिक ५ गते नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयनको लागि परिपत्रात्मक आदेश ग¥यो ।
सरकारको उक्त निर्णय र कार्यान्वयनको लागि गरिएको आदेशको प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले इन्कार गरिसकेको छ । समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले भनेका छन् यो मुलुकको संविधान समेत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाममा जारी भइसकेर कार्यान्वयन समेत भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले असोज ११ गते गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने निर्णय संविधानतः त्रुटिपूर्ण छ ।
त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने नेपालको पुरा नामबाट कुनै पनि अलंकारपूर्ण शब्दहरु नहटाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । आफ्नो पहिचान सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउने निर्णय गर्नु नै गलत हो । यसरी ती अलंकारहरु हटाउँदै जाने हो भने नेपालको औपचारिक पहिचान के त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यस्तै हो भने त पञ्चायती प्रजातन्त्र नेपाल पनि बन्न सक्छ ।
सरकारले निर्णय गर्दा यसरी मुलुकको अस्तित्व भनि नै प्रश्न उठ्ने निर्णय कसरी गर्न पुग्यो ? के मुलुकलाई लोकतन्त्रविहीन बनाउने उद्देश्य नै हो सरकारको ? उसो भए सरकारले निर्णय गर्दैमा ठहर हुन्छ भने किन शब्दजाल फालेर घुमाउरो पारामा गर्नुप¥यो ? सिधै जे भन्नु छ भने भैहाल्यो नि । सरकारले अलोकतान्त्रिक पद्धति अर्थात् लोकतन्त्र भन्ने शब्दबाटै सरकारलाई चिल्याट आएको हुनसक्ने कारणले नै सरकारले गर्ने सबै कामकाज र गतिविधिहरु अलोकतान्त्रिक बन्दै गएको हुनसक्छ । तै पनि सरकार भन्दै छ लोकतन्त्र मासेरै भए पनि त तातोपानीको आयात बन्द ग¥यौ ।
कुतिको बाटो खोल्यो । लेख्ने मामलामा मात्र नेपाललाई अलोकतान्त्रिक शब्दालंकारले विभुषित गर्नको लागि मात्र झिकिएका हुन् नेपालबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द । त्यसैका निमित्त त हामीले पार्टीलाई मृत्युशै®यामा राखेर र भए पनि अलोकतन्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गरिरहेका छौँ । विभिन्न नेता भर्सेज ओली भएर लडिरहेका छौँ । कहिले दाहाल भर्सेज ओली, कहिले दाहाल नेपाल भर्सेज ओली त कहिले दाहाल नेपाल खनाल गौतम र श्रेष्ठ सहितको सशक्त टिम भर्सेज ओली । यी सबै कुरा बुझ्दाबुझ्द्ये पनि नेपाली जनताले किन होला ?
ओलीको अलोकतान्त्रिक गतिविधिको भूमिकालाई नबुझेको ? यत्रो भारी मतका साथ सत्तामा पुगेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई शै®यामा सुताएर भए पनि देश र जनताको भलोको निम्ति खटिएको कुरा किन नबुझेको नागरिक महोदय ? विश्वास लाग्दैन भने शेरबहादुरलाई सोध्नुस् ? मैले शेरबहादुरलाई शान्तपूर्वक कति मीठो निद्रामा सुताइरहेको छ । जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका निमित्त बरु गोकुललाई ७०–८० खान्छस् भने खा तर जनस्वास्थ्यको उपचाररत गर्नैपर्छ भनेर आफ्नै अडानमा मास्तिरका बडाबाका घरबाट स्वास्थ्य उपकरणसम्बन्धी सबैखाले प्रयोग र परीक्षण सामग्री मगाउन लगायौ ।
हेर्नुसि न त्यसको भुँडी कत्रो छ ? त्यस्तै उपचारको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सरकारका विरुद्धमा सर्वोच्च जान खोज्यो । कतिपटक भनसुनी र वादविवाद पनि भयो । अन्त्यमा सानो बाबुको जिद्दीलाई मेटाउन पनि उसकै भने अनुसार सहमतिबाटै सबैको औषधी उपचारको प्रबन्ध मिलाउने सहमति भयो । पहिले त मैले चारवटा मृगौला बोकेको बिर्सेको थिएँ । पछि झल्यास्स सम्झे । निद्राबाट व्यूँझेकोझै भएा । ओहो ! मैले घुसारेको काँचो आँपको झुप्पाले त यति काम गर्दै रैछ भने सामान्य कोरोनाको सामान्य उपचार गरे त पक्कै पनि सन्चो हुन्छ भनेर जेठा, कान्छा दुईभाइ अर्थात सर्वोचच र मेरो सहमतिबाट निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्ने सहमति भएको छ । फेरि बुझ्नुहोला कि अहिलेसम्म सबैलाई सहमति अनुसार स्वास्थ्योपचार चाहिँ गर्नु परेको छैन नि ।
भित्रभित्रै हामी आफ्ना घरका दाजुभाइ जत्ति लुछाचुँडी गरे पनि माइलाबाको छोरो शेरुलाई सम्झिराछु । यसपालिको तिहारमा त माइलाबाको छोरासँग पनि टीका लगाउनु पर्छ केर कान्छी भनेर स्यान्नानीलाई माइलाबाको छोरा शेरे ठुल्दाइ पनि निम्ता गर्छेस कि भनेर सम्झाइसकेको छु । मर्दा, बढ्दा चाहिने दाजु हुन्, जे भए पनि नछुट्याएस् भनेको छु । अरु जेसुकै भए पनि दाजुको कुरो मैले पनि काटेको छैन । तैँले पनि न छुट्याएस स्यान्नानी । उहिले कुल छुट्याएर गएका दाजुभाइलाई एउटै घरका हुम् भनेर मान्सो एउटै गरौँ न त भनेर मान्सो मिसाउँदा अहिले थाल खाउँ कि भात खाउँ भइराखेको छ ।
हिजो म विरामी देखेर पो सहानुभूति देखाको जस्तो गरेर हाम्रो बैठकमा सुन्त आएका रैछन् । आज म अलि तङ्ग्रिएपछि भित्र बाहिर आफै गर्ने भएपछि उनीहरल्े सोचेजस्तो म नथलिने पक्का भइसकेपछि मैले प्रयोग गर्दै गरेको ओखतीमुलो लुकाएर अन्तै गएर बस्ने जस्तो गर्न थालेपछि मैले पल्ला घरको ठुल्दाइलाई सम्झेको हुँ । उनी अलि मिठौजे छन् । मीठो खानेकुरामा जुस उनको रोजाइको परिकार हो । तिहारको तिलौरासँग जु चाहिँ नछुट्याउन् ।
त्यति भए पल्लाघरे दाजु र उनका पट्टि सबै खुश । फेरि कहिलेकाहीँ अन्न पानीको शरीर त हो सन्चोबिसन्चोमा उठाउनु, बसाउनु परे दाइ टुप्लुक्क आइहाल्छन् । अर्को बाहुन्ले कुमाइ बाहुनको हाट हेर्दिन भन्छ । के गर्छस् त आफ्ना निम्ति सम्झिन परेको छ । पल्लाघरे ठूल्दाइलाई नबिर्सेस् । जुठो सुत्को लाग्ने दाजुभाइहरु मौका परेर घाँटी समाउन आउँछन् । यिनलाई के घर भन्नु के आफन्त भन्नु । पल्लाघरे ठूल्दाइ त थर, गोत्र नमिले पनि कमसेकम पर्दा सहयोग त गर्छन् । भाउजु पनि गुणी नै छन् । सासुआमालाई राम्रो थान्को दिने हो भने ठूल्दाइले बाहुन, नेवार मधेशी कसैसँग केही सल्लाह नै नगरी खुरुक्क के अप्ठेरो प¥यो भन्न आइहाल्छन् ।
यिनीभन्दा त तिनी साह्रै बेश । अहिले त उनीबाट कुर्सी तान्लान भन्ने डर नभएर कुर्सी जोगाइदिन्छन् भन्ने भर पो लाग्छ त मलाई । उनी पनि मजस्तै छन् । उनलाई खुशी गराउनुपर्छ, उनका पट्टि जेसुकै होस् मैतिर फर्किन्छन् । त्यसैले त म पनि यतातिरका बटारिन थाले भने म उनीतिर फर्किन्छु । अनि ठूल्दाइले मतिर यसो कान लगाइहाल्छन् । मलाई पनि उनको कान दिएपछि सुस्तरी भन्न पनि पाइने भयो ।
अरुहरुलाई पनि तुरुन्तै सुनाउन परेन । बरु गर्विलो इतिहास भएको भन्ने नेकपा मृत्युशै®यामा किन नसुतोस् पूर्ण बहुमतको हाराहारीको मतबाट गठन भएको सरकार धरापमा किन नपरोस् म त प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छोड्न सक्दिन बरु लोकतन्त्र छोडेझैँ जि५ लाई छोडेर पल्लाघरे ठूल्दाइसँग सहयोग लिन तयार छुँ । बेलगाडा चढेर पुगेको लोकतन्त्र छोड्न त मलाई केही गाह्रो भएन भने यिनी जालीहरुको जाल काट्न मलाई केको महाभारत ? फेरि उता सर्वोच्चले पनि मेरो अर्कोबाट खोलिदिएको छ ।
हिजो हरेक संकटमा मलाई साथ दिँदै आएका मुतिघ्रेलार्य फेरि जालैजालमा हालेर अलमल्याउने मौका पनि परेको छ । स्वभावले उनी पनि तामझाम र अलंकार सहितको शक्तिमा बस्न मन पराउँछन् । पार्टी राजनीति, सरकार र प्रतिपक्ष दलको भूमिकाले पनि मेरो नीति र कदमलाई साथ दिइरहेको छ । म सबै तिरबाट बलियो नै छु । उता महामहिम पनि अहोरात्र मेरो मृगौला रक्षाका निम्ति तयार हुनुहुन्छ ।
ममाथि यदि संकट आइहाल्यो भने सधैँ पार्टी संकटमा परेकोबेला मलाई ठूलो मान्छे बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने दुई–चार भुस्तिघ्रेहरुलाई शीतलनिवास गाढा कफी स्वागत गर्न तयार छ । त्यतिले पनि पुगने भने ममाथि अरुहरुबाट समाधान हुन नसक्ने परिस्थिति आइलाग्यो र मैले धान्न नसक्ने भएपछि उहाँ मेरो समस्या समाधानका निमित्त शीतलनिवासको गेटसम्म आउन तयार हुनुहुन्छ ।
ओली नै ओली नै हो । ओलीको भाषा बुझ्नेलाई ओलीले बोलेको बोली हो । होइन भाषा पनि बुझ्दैन, साथ पनि दिँदैन भने त्यो ओलीको बोली गोली हो । फेरि आज सघन उपचारमा रहेका कम्युनिष्टहरुलाई पूरै ५ वर्ष कोमामै राख्न पनि सकिन्छ ।
मैले जाने बुझेर देखेका सबै हत्कण्डा अपनाउने हो भने मलाई पनि सजिलो त हुने छैन । तर यिनी पनि झिटी, गुण्टा बोक्न तयार भए हुन्छ । अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई छोडेर नेपाल मात्र लेख्ने हाम्रो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका विरुद्ध जसले जतिवटा उजुरी दिए पनि सर्वोच्चलाई हाम्रो निर्णयको विरुद्ध फैसला गर्ने अधिकार छैन । हाम्रो नेपालमा त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने त एउटा जाल मात्र थियो ।
५ वर्ष पुग्यो त्यो जाल पनि पानीमा फाल्दाफाल्दा चुडियो सडेर । बाँकी त अब नेपाल मात्र रह्यो । म पनि अब नेपालकै कार्यकारी प्रमुख भएर रहने विचार छ । यस विषयमा मैले पल्लाघरे ठूल्दाइलाई पनि मनाइसकेको छु । यो सुन्नाबित्तिकै चित्रबहादुरजी जेठा कामरेडलाई भेटाएको कोरोना पनि कता भाग्छ भाग्छ । हाम्रा पटक–पटकका आन्दोलनबाट कति कम्युनिष्टहरु अस्तित्वमा आए आए तर हाम्रो जस्तो सुविधायुक्त बहुमत कुनै कम्युनिष्टले पनि प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । आज त्यो सुविधा हाम्रो नेतृत्वको सदन र सरकारले प्राप्त गरेको छ ।
तसर्थ हामीलाई कसैले चाहे कांग्रेस होस् चाहे कम्युनिष्ट कसैले चुरीफुरी नगरे हुन्छ । जसले मलाई सहयोग गर्छ भने त्यसलाई मैले आफ्नो अनुकूलको समय र परिस्थिति अनुसार स्थान दिने काम गरिन्छ । जो असहयोगमा उत्रेर मेरा विरोधमा लाग्छ तिनलाई मैले उछितो काड्न जानेको छु । अहिले हाम्रो देशमा कोही भारत आएर खुशी हुने कोही चीन आएर खुशी हुने ती त सबै स्वप्नदोष मात्र हुन् । चाहे जे नाममा जसरीसुकै होस् म अहिले कुनै पनि तह अर्थात् पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिने अवस्था र सम्भावना केही छैन ।
यदि कसैले जबर्जस्ती ग¥यो वा जबर्जस्ती गर्न खोज्यो भने त्यसको नतिजा जे पनि हुनसक्छ । त्यसैले हल्लाका पछाडि कोही पनि नलागौँ । अन्त्यमा पार्टी इतर पंक्तिका ५ नेताहरुले कार्तिक २७ गते सचिवालयको बैठक बोलाउन अनुरोध गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पहलमा सचिवालयको बैठक बोलाउने भएका छन् । हेरौँ ती नेताहरुले यदि सचिवालयको बैठक बोलाउने कुरामा आनेकाने भयो भने पार्टीका सबै निकाय र तहको बैठकबाट निर्णय गराएर सोही अनुसारको कारवाही गरिने धम्की पनि दिएका थिए ।
त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली अलि जुर्मुराएका हुन् कि ? स्मरण रहोस् जनताले चुनेर पठाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्ति जोगवनी–किमाथान्का सडकको अवलोकन गर्न गए । जुन सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन जम्मा १३ किमि मात्र बाँकी छ । उक्त सडक निर्माण कार्य सुरु भएको करिब ८ महिना भयो । उसबेला पनि यस विषयमा जनस्तर र सदनमा समेत प्रश्न उठेको थियो । उतिबेला सरकारले कोरानाको नाममा सुनेको नसुन्यै ग¥यो ।
जसबेला हेर्नुपर्ने थियो उतिबेला हेरेको भए उक्त सडक कुनै ठाउँमा सच्चिने पो हुन्थ्यो कि ? आज आएर संखुवासभाको किमाथान्का जोड्ने जोगबनी सडक हेर्नुको अर्थ के ? यिनी सबै जाल र झेलका कुरा हुन् । आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरु भन्नेले पनि केही किन बोलेनन् ? जनताले उनीहरु दुवैसँग प्रश्न गर्न चाहन्छन् ।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाममा बजेट विनियोजन गर्दाभन्दा अघि पछि अरुण तेस्रो भनेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगरेको जनताले सुनेका थिएनन् । आज यी दुई विषय एकैचोटि कहाँबाट निस्किए ? यो त सबै इष्ट रिझाउने खेल मात्र भएको जस्तो जनतालाई लागिरहेको छ ।
राप्तीका चार सहकारी संस्था मर्जको तयारीमा